Villa Viole - ilizwe villa e Montepulciano
I-villa ye-tuscan enoxolo, ibekwe ilizwe elineenduli kunye nembono yasemaphandleni engaphantsi kweekhilomitha ezi-3 ukusuka edolophini ye-Montepulciano kunye ne-wine ye-Nobile eyaziwayo yehlabathi! Indawo elungileyo ikunika ukufikelela ngokulula kuyo yonke iwayini kunye nokutya kunye nepanorama enomtsalane, ukusuka kwikhaya lakho kude nekhaya ukwindawo efanelekileyo ukonwabela ummandla omnandi.
Onke amagumbi okulala aligumbi elipholileyo kwimithunzi yemibala yemveli ye-tuscan, isinxibo sakudala kunye ne-armoire. Umnqweno wam kukupeyinta kwaye kuwo onke amagumbi okulala uya kufumana iifrescos ezintle ezenziwe ngezandla.
IViola Viole ikwimigangatho emibini enegadi yabucala enegazebo, engaphakathi kwipropathi yePodere Le Manzinaie.
Sicebisa ukuba uze nemoto yakho, ukonwabela ngokupheleleyo ummandla. Kukhenketho lwewayini yabucala sinokukunxibelelanisa nababoneleli abaninzi ngamava obomi bonke. Izithuthi zikawonke-wonke zinqongophele kakhulu kule ndawo, sincoma ukuqesha imoto ukonwabela eyona ngingqi intle emhlabeni.
Ekuseni nasemva kwemini. Bhrawuza ingqokelela yethu yeemenu zokutyela zaseMontepulciano ezingalinganiyo kwindawo yokutya kunye neendawo zokutyela eziqhelekileyo. Ngokuqinisekileyo siya kukuvuyela ukwenza izindululo kunye nogcino lwakho. Singacebisa zonke iindawo ezintle zokutyelela kwindawo.
Ekuseni nasemva kwemini. Bhrawuza ingqokelela yethu yeemenu zokutyela zaseMontepulciano ezingalinganiyo kwindawo yokutya kunye neendawo zokutyela eziqhelekileyo. Ngokuqinisekileyo…